ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Shanghai Jiahao Machinery Co.Ltd.
ရှန်ဟိုင်း JIAHAO Machinery Co., Ltd. သည် လူသိများသော ပလပ်စတစ်ထုတ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအဖြစ် ရှန်ဟိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ရှန်ဟိုင်းနှင့် Jiangsu ပြည်နယ်တွင် စက်ရုံ ၃ ခု တည်ဆောက်ထားသည်။နှစ် 20 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီသည် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တယ်လီကွန်းစနစ်၏ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာပရောဂျက်များတွင် ပလပ်စတစ်ထုတ်ပိုးမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့်စနစ်တွင် အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
2. ပလပ်စတစ် (PVC, PC, PS, PET, PE, PP), စာရွက်, ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း;
3. WPC/SPC အခင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
4.Plastic (PVC, PC, PS, PET, PE, PP) Profile Production line;
5. Wood ပလပ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပရိုဖိုင်း။
6.Mixer, Crusher, Grinder, Mould, Chiller စသည်တို့အတွက် အရန်စက်များ၊
7. ပလပ်စတစ်စာရွက်၊ ပရိုဖိုင်ထုတ်လုပ်မှုပရောဂျက်အတွက် သော့ဖွင့်သည့်ပရောဂျက်
Jiahao ကုမ္ပဏီ၏ အထက်ဖော်ပြပါ စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိကနှင့် အရှေ့တောင် အာရှဒေသနှင့် အခြားနိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်သို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပြီး သုံးစွဲသူများဘက်မှ အောင်မြင်သော ပရောဂျက်ဖြင့် နာမည်ကောင်းရရှိထားသည်။
Jiahao ကုမ္ပဏီသည် နည်းလမ်းတကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု ထုတ်ကုန်များ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးကို စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို တင်းကြပ်စွာ တောင်းဆိုထားသည်။Jiahao ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတော်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကို အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ လက်ခံကျင့်သုံးပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီကို တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ကာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်။စက်ပစ္စည်းများကို ဖောက်သည်များထံ ပေးပို့ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အပြည့်အစုံကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။ကုမ္ပဏီသည် ရှန်ဟိုင်းတွင် ပြီးပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းစဉ်နည်းပညာဖြင့် အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော နည်းပညာအဖွဲ့တစ်ခု၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်း 100 ကျော်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းကိရိယာအစုံအလင်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် ၎င်းတို့သည် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။သုံးစွဲသူများအား ပြီးပြည့်စုံသော အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန် သီးခြားလွတ်လပ်သော အရောင်းအပြီးဌာနတစ်ခုရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာများသည် နိုင်ငံရပ်ခြား ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။